offset ဂီယာမော်တာ, offset ဂီယာလျှော့, offset torque ဂီယာအုံ
F စီးရီးအပြိုင်ရိုးတံ helical ဂီယာလျှော့ချကိရိယာ (ဂီယာအပြည့်အဝကြိတ်ခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းခြင်း)
ဘေးဘက်တပ်ဆင်မှုအတွက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဘေးထွက်ပေါက်များဖြင့် Space-optimized design နှင့် Compact ခိုင်ခံ့သောလျှပ်စစ်မော်တာချိတ်ဆက်မှု၊ Unibox အိုးအိမ်၊ EnForced gearshaft ချိတ်ဆက်မှု (သို့) Servomotor နားချင်းဆက်မှီ၊ အလွန်ကျယ်ပြန့်သောအချိုးအစား (4 Stages) Atex - ဂီယာအုံ ပေါက်ကွဲပတ်ဝန်းကျင်များ 2G / 2D ။
Parallel Shaft Helical Offset ဂီယာမော်တာသည်အစိတ်အပိုင်းနှင့်သိုလှောင်မှုအမျိုးအစားများကိုများစွာလျော့ကျစေပြီးပို့ဆောင်ခြင်းသံသရာကိုတိုစေသည်။ ဂီယာနှင့်ဂီယာပါ ၀ င်သည့်သံမဏိသေတ္တာများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ carburizing နှင့်မီးအားဖြင့်မျက်နှာပြင်ခိုင်မာသည်။ ဆူညံသံနိမ့်ပြီး၊ သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကြီးမားသည်၊ အပူချိန်မြင့်တက်နိမ့်သည်နှင့်လုပ်ငန်းသက်တမ်းသည်ကြာရှည်သည်။
0.50 rpm ရောင်းအားများအတွက် Offset Gear မော်တာ။ 1.5 rpm ရောင်းရန်အတွက် Offset Gear Motor ။ ရောင်းရန်အတွက် 3.4 rpm Offset Gear Motor ။ ရောင်းရန်အတွက်4rpm Offset Gear Motor ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Parallel shaft helical Offset ဂီယာမော်တာကိုအဓိကအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အစာကျွေးသောစက်ကိရိယာများစသည်တို့တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ Sogears ၏ညာဘက်ထောင့်၊ Inline နှင့် offset ဂီယာမော်တာများအသုံးပြုသည့်အတွက်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သော servo ဂီယာမော်တာများသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ -optimized ။
အပြိုင်ကျဉ်းသောအပြိုင်လှိုင်းတပ်ဆင်ထားသည့် Offset ဂီယာမော်တာများနှင့်ဂီယာပြန်အားသွင်းသူများသည်အခြား ဦး ဆောင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လဲလှယ်နိုင်မှုကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Parallel offset ဂီယာမော်တာများသည်ထိရောက်သော helical ဂီယာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်ဘရိတ်သို့မဟုတ်ကျုံ့သော disk များကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်။ နှင့်ရိုးအဆုံးစက်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်။ sogears ထုတ်လုပ်ခြင်းမှလျှပ်စစ် offset ဂီယာမော်တာအတွက်ကျွမ်းကျင်သောစိတ်ကြိုက်မော်တာဒီဇိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏တိကျသောအသုံးချမှုအတွက်ဂီယာမော်တာကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်တာထုတ်လုပ်သူများနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။
Sogears အမျိုးအစား A offset gear motor မ်ားအား 19 အရွယ်အစားများတွင် ၀ င်သောဂီယာအုံများနှင့် torque bracket နှင့်ခြေလျင်သို့မဟုတ်အနားကွပ်တပ်ဆင်ခြင်းပုံစံတို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ဂီယာမော်တာအားလုံးသည်အမြဲတမ်းသံလိုက်ဂီယာမော်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစံပတ်ပတ်လည်ဂီယာသေတ္တာသေတ္တာသွန်းထားသောအိမ်ရာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို DC motor များသို့မဟုတ် AC MOTORS များတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
1 ။ F စီးရီးလျော့ချခြင်းကိုနိုင်ငံတကာနည်းပညာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားပြီးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာမြင့်မားသည်။
2၊ နေရာချွေတာခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတာရှည်ခံခြင်း၊ မြင့်မားသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် 90KW ထက်ပိုသောစွမ်းအားရှိသည်။
၃။ F စီးရီးအပြိုင်လှည့်စက်များ helical gear reducer သည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး 3% ကျော်ထိရောက်မှုရှိသည်။ မည်သည့် ဦး တည်ချက်တွင်မဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် 95-Frame ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဂီယာမော်တာများသည်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်၊ စုပ်စက်၊ လက်အောက်၊ ကြမ်းပြင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
4. စင်ပြိုင်ရိုး helical ဂီယာလျှော့ တုန်ခါမှု၊ ဆူညံသံနည်းပြီးစွမ်းအင်ချွေတာမှုနည်းသည်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော 20CrMnTi ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူကုသမှုအား carburizing နှင့် quenching ပြီးနောက် 58-62HRC ၏မျက်နှာပြင်မာကျောမှုရှိသည်။ ကြိတ်ပြီးနောက်တိကျမှုသည်မီးခိုးရောင် 5-6 ဖြစ်နိုင်သည်။ utility model သည်မြင့်မားသောအပြောင်းအလဲမြန်တိကျမှု၊ တည်ငြိမ်သောဂီယာ၊ သေးငယ်သောပမာဏပါ ၀ င်သည့်စွမ်းရည်နှင့်သက်တမ်းရှည်သောအားသာချက်များရှိသည်။
5 သည်တိကျမှန်ကန်သောစက်မှတစ်ဆင့် ၀ င်ရိုး၏အပြိုင်နှင့်တည်နေရာတိကျမှုကိုသေချာစေရန်၊ အားလုံးသော reducer ၏ဂီယာဂီယာတပ်ဆင်မှုသည်မော်တာအမျိုးမျိုးနှင့်တပ်ဆင်ထားပြီးစက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ပေါင်းစည်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအရည်အသွေးကိုအပြည့်အဝအာမခံသည်။ ရည်ရွယ်မော်တာ၏အသုံးပြုမှုကို။
1 Q: ဂီယာမော်တာအတွက်သင်၏ MOQ ကဘာလဲ။
A: 1unit သည်မတူညီသောအမျိုးအစားများအတွက်အဆင်ပြေသည်။
2 Q: သင်၏ဂီယာမော်တာအတွက်အာမခံချက်ကဘာလဲ။
ဖြေတစ်နှစ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Konecranes စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Offset Geared Motors စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရူပီး ၄၀၀၀၀ / တစ်ယူနစ်၊ Muneashtra၊ ယခုငါတို့ထံမှအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုရယူပါ။
3 Q: OEM ၀ န်ဆောင်မှုကို customer-logo နှင့်ပေးပါသလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM အမှာစာများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအဓိကထားသည်။
4 Q: သင်၏ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
A: TT၊ Western Union နှင့် Paypal ။ $ 100 လျော့နည်းသောအမှာစာများအတွက်ကြိုတင်ငွေပေးငွေအတွက် 5,000% ငွေပေးချေမှု။ $ 30 ထက်ပိုသောအမိန့်များမပို့မီ 5,000% အပ်ငွေနှင့်လက်ကျန်ငွေ။
5 Q: မင်းရဲ့ထုပ်ပိုးမှုကော။
A ပုံး၊ အထပ်သားအမှု။ သင်ပိုမိုလိုအပ်ပါကကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို pallet ဖြင့်ထုပ်ပိုးနိုင်ပါသည်
6 Q: အကယ်၍ သင်ကဂီယာမော်တာကို ၀ ယ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေပေးသင့်သလဲ။
A: Rated power၊ ဂီယာအုံအချိုး၊ input speed၊ mounting အနေအထား။ ပိုအသေးစိတ်, ပိုကောင်း!
7 Q: ဂီယာကိုဘယ်လိုပို့မလဲ။
A: ပင်လယ်၊ လေ၊ အမြန်ပို့ဆောင်ရေးတို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့နှိုင်းယှဉ်ပြီးရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။
40Cr သို့မဟုတ် 42CrMo
ရေနံတံဆိပျကို postion မာကျောမှာရိုးတံ
တိကျသောကြိတ်ခွဲခြင်း 4-6 တန်း
NSK, SKF စသဖြင့်
NAK, SKF စသည်တို့ဖြစ်သည်
မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းစသည်တို့ကို 40Cr သို့မဟုတ် 42CrMo၊
1. စင်ပြိုင် output ကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကြီးမားသောထုတ်လွှင့်မှု torque၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ ဆူညံသံနည်းပြီးသက်တမ်းရှည်သည်။ F စီးရီး - အလင်းလည်ပတ်သောအော့ဖ်စက်များပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်လည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေး-60˚Fမှ + 250˚Fအထိ။ AC မော်တာအား265˚Fအထိသတ်မှတ်သည်။ ပုံသွင်း Composite အိမ်ရာ။
2၊ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း - အခြေပြုတပ်ဆင်ခြင်း၊ အဆို့ရိုးတပ်ဆင်ခြင်း၊ အနားကွပ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ torque လက်မောင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ သေးငယ်သောအနားကွပ်တပ်ဆင်ခြင်း။
3, အလယ်တန်း input ကိုနှင့် output ကိုလည်ပတ် ဦး တည်ချက်၏အမျိုးအစားအမျိုးအစားတူညီသည်, တတိယအဆင့်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်။ , မေးမြန်းသည့်အခါ F / R ကိုပေါင်းစပ်။ Sogears offset gear motor သည်အခြား offset gearmotor များ၏ 143: 1 ဗားရှင်းအားအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင် 143 ထက်မြန်သောအမြန်နှုန်းကိုလိုချင်လျှင်သင်အလိုအလျောက်ပေးပါမည်၊ ဤသည်သည်သင့်အတွက်မော်တာဖြစ်သည်။
4. output ကို mode ကို: ဆွန်းရိုး output ကိုသို့မဟုတ်အစိုင်အခဲရိုး output ကို။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအင်ဂျင်နီယာသည်အပြိုင်ဂီယာမော်တာများကိုထွင်းဖောက်ထားသောဆွန်းရိုးအပြည့်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်သည်။ အစားအစာဖြန့်ဝေသည့်ကိရိယာများ၊
5 ။ ပျမ်းမျှထိရောက်မှု: ဒုတိယအဆင့်အတွက် 96%၊ တတိယအဆင့်အတွက် 94% နှင့် F စီးရီး / R စီးရီးအတွက် 85% ။
မြန်နှုန်းအချိုးအစား: အခြေခံအမျိုးအစား 3.81 ~ 281.71၊ F / R ပေါင်းစပ်မှုအမျိုးအစားသည် 31434 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်
torque အကွာအဝေး: 200 ～ 18000 Nm
စွမ်းအားအကွာအဝေး - ၀.၁၈ မှ ၂၀၀ ကီလိုဝပ်၊ bg power ဂီယာမော်တာတပ်ဆင်ထားသော်လည်းမြန်နှုန်းနှစ်ဆနီးပါးရှိသည်။ torque ကျော်မြန်နှုန်းလိုအပ်နေစက်ရုပ်များအတွက်ကြီးမြတ်!
ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား: F-shaft extension အမျိုးအစား၊ ခြေဖြင့်တပ်ဆင်ထားသော FF-shaft extension အမျိုးအစား၊ အနားကွပ်ချိတ်ဆက်မှု၊ FS- ဝင်ရိုးထည့်သွင်းမှု FA- ဝင်ရိုးတပ်ဆင်ထားသောဆက်သွယ်မှု၊ FAF-shaft တပ်ဆင်ထား၊ အနားကွပ်တပ်ဆင်ထားသည်
F စီးရီး၏အပြိုင်ရိုးတံကြိုး helical ဂီယာလျှော့၏အဓိကမော်ဒယ်များနေသောခေါင်းစဉ်:
F / FA / FAF37, F / FA / FAF47, F / FA / FAF57, F / FA / FAF67, F / FA / FAF77, F / FA / FAF87, F / FA / FAF97, F / FA / FAF107, F / FA FA / FAF127၊ F / FA / FAF157
Sogears Manufcturing အကြောင်း
နောက်ခံ - Sogears Yantai Bonway Manufcaturer Co. , Ltd. ၏စက်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည် (၁၀) နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
စက်မှုထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံများ, Sogears အမြဲတမ်းတင်းကြပ်စွာရပ်တည်
အရည်အသွေး: ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကုန်ချောစစ်ဆေးခြင်း၊ ကြိုတင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစစ်ဆေးခြင်း
Mission: "တစ်ချိန်ကနှင့်အစဉ်အမြဲ" သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဖောက်သည်များအားအစေခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့လုပ်ပြီးတာနဲ့
စျေးကွက်: အဓိကအားဖြင့်ဂျာမနီ၊ သြစတြီးယား၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည်။
SERVICES: အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ ဂျပန်နှင့်တရုတ်ဘာသာစကားများဖြင့်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှု။
OEM: စိတ်ကြိုက်အမှာစာ Sogears မှာကြိုဆိုပါတယ်။